Lapan’Iavoloha : Noraisin’ny Filoham-pirenena ny Kardinaly vaovao -
AccueilRaharaham-pirenenaLapan’Iavoloha : Noraisin’ny Filoham-pirenena ny Kardinaly vaovao
29/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fankasitrahana. Noraisin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana teny Iavoloha omaly tolakandro, ny monsenera Désiré Tsarahazana, kardinaly malagasy vaovao, vao avy notendren’i Vatikan. Niara-dia tamin’ny tamin’izao fihaonana izao ny Nonce Apôstolika, monsenera Paolo Rocco Gualtieri sy ny filoha lefitry ny kaoferansan’ny eveka eto Madagasikara, Monsenera Marie Fabien Raharilamboniaina, evekan’i Morondava.
Nandritra izany fihaonana izay dia niarahaba ny Kardinaly Désiré Tsarahazana ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, noho ny fanendrena azy amin’izany toerana izany, ary nanambarany ny fahavononany hanampy azy amin’izany andraikitra noraisiny izany. Hotanterahina any Roma ny 29 jona 2018 ny fanambarana ofisilay ny fanendrena ny Kardinaly Désiré Tsarahazana. Ny kardinaly malagasy vaovao kosa dia nanamarika fa ny fiangonana Katolika dia tsy misintaka, ary tsy hisintaka na oviana na oviana amin’ny fanjakana, tsy araka ny tsaho miely.